NCA Minsen thu mi Tlangcung Hriamtlai phu nih Ralkap ton ding in ca an kuat hna. – Hakha Cherry
NCA minsen athu mi phu(10) lak ah CNF an i tel ve. A si nain hi tonnak cu CNF nih an duh lo, an hnatlak pi hna lo tiah Salai Bawi Lian Mang nihapumpak cahmai ahalanghter. CNF nih cun Ralkap he ton le biaruah hrimatim lo tinakasi. Lungahmui deuh ngai
“Shame! ရှက် ဖွယ် လိ လိ ကမ်း လှမ်း ချက်။
CNF မ ပါ လို့ေတျာေသး။Khuaruah har ningzak bia hi ruahlo nak hmun inarak chuak hoi. CNF nih hi ca hiahna atlak pi hna lo caah tlawmpal thaw achuak deuh.
Mipi he adir tti lo mi dothlennak zeitik hmanh ah an hlawh atling ballo.
Mipiakapathat mi ralkap zeitik hmanh ah an hmun ballo. Crd: Salai Bawi Lian Mang”Credit-Salai Cung Dawt
စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ PPST ကမ်းလှမ်းတဲ့စာ ထွက်ပေါ်လာ NCA အပစ်ရပ်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၁၀ ဖွဲ့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည် ဖော်တဲ့အဖွဲ့ (PPST) က စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ကမ်းလှမ်းတဲ့ လျှို့ဝှက်စာမူကြမ်းကို ဒီနေ့ မေလ ၂၈ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ရေးသားထားပါတယ်။
RFA ကလက်ခံရရှိထားတဲ့ အဲဒီစာမူကြမ်းမှာ… စစ်ကောင်စီက တာဝန်ပေးထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့်ကို လိပ်မူထားပြီး၊ အကြောင်းအရာမှာ NCA ကိစ္စလို့ ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ကိုယ်စား ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းနောင်က လက်မှတ်ထိုးပြီး မေလ ၁၉ ရက်နေ့က ပေးပို့လိုက်တဲ့စာကို မိမိတို့ EAO အဖွဲ့တွေက လက်ခံရရှိပြီး၊ တပ်မတော်က NCA စာချုပ်ကို လက်ခံမယ် ဆိုတဲ့အတွက် ဝမ်းသာတဲ့အကြောင်း အစချီ ရေးထားပါတယ်။
အချက် (၇) ချက်ပါတဲ့ ဒီလျှို့ဝှက်စာထဲမှာ … လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်း အခြေအနေတွေဟာ တပ်မတော်ရော၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေရော၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရော၊ ပြည်သူအတွက်ရော ဘယ်သူ့ အတွက်မှ အကျိုးမရှိ တဲ့အကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လေ ကောင်းလေလို့ ဆိုထားပါတယ်။
မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ တချို့နိုင်ငံတွေက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်စွက်ဖက်နေတယ်လို့ စွပ်စွဲပြောဆိုထားသလို၊ ဒီလို စွက်ဖက်တာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် မိမိတို့နဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် နိုင်ငံသားတွေကို စည်းမျဉ်းတွေ၊ ဘောင်တွေထဲကနေ ဖိတ်ခေါ် လက်တွဲတဲ့နည်းက အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ သူတို့အယူအဆကို ရေးထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် တပ်မတော်နဲ့ PPST အဖွဲ့ အမြန်ဆုံးတွေ့ပြီး အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးဖို့နဲ့ PPST ပူးတွဲကြေညာချက်မူကြမ်း ထုတ်ဖို့လည်း စီစဉ်နေတယ်လို့ စာထဲမှာ ရေးထားပါတယ်။
အခုစာဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးကို သစ္စာဖောက်တဲ့လုပ်ရပ် ဖြစ်တယ်လို့ အမည်မဖော်လိုတဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဒီစာကို ဘယ်အဖွဲ့၊ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်က ဦးဆောင်ရေးသား ပေးပို့တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြမထားသလို၊ ဒီစာကို PPST မှာပါတဲ့ ၁၀ ဖွဲ့လုံးက သဘောတူသလား ဆိုတာကိုလည်း လောလောဆယ် မသိရသေးပါဘူး။
KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးဆေးဖိုးက NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ မေလ ၉ ရက်နေ့က ရေးသားထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီးနောက် အဲဒီအပေါ်မှာ လက်ရှိပြည်သူတွေရဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကို ကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့ KNU အဖွဲ့တွေနဲ့ သဘောထား ကွဲလွဲခဲ့ပါတယ်။
(Zawgyi) စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ PPST ကမ်းလှမ်းတဲ့စာ ထွက်ပေါ်လာ NCA အပစ်ရပ်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၁၀ ဖွဲ့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည် ဖော်တဲ့အဖွဲ့ (PPST) က စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ကမ်းလှမ်းတဲ့ လျှို့ဝှက်စာမူကြမ်းကို ဒီနေ့ မေလ ၂၈ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ရေးသားထားပါတယ်။
RFA ကလက်ခံရရှိထားတဲ့ အဲဒီစာမူကြမ်းမှာ… စစ်ကောင်စီက တာဝန်ပေးထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကို လိပ်မူထားပြီး၊ အကြောင်းအရာမှာ NCA ကိစ္စလို့ ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးဆေးဖိုးက NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ မေလ ၉ ရက်နေ့က ရေးသားထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီးနောက် အဲဒီအပေါ်မှာ လက်ရှိပြည်သူတွေရဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကို ကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့ KNU အဖွဲ့တွေနဲ့ သဘောထား ကွဲလွဲခဲ့ပါတယ်။https://www.rfa.org/burmese/news/ppst-propose-regime-meeting-leak-05272021195329.html
A tu Miss Myanmar kan cawi san mi nak in tha deuh in tah kan Cawi sang ve hnga maw?